Fokontany 67 ha Avaratra : Kamo mijery lisi-pifidianana ny olona -
AccueilSongandinaFokontany 67 ha Avaratra : Kamo mijery lisi-pifidianana ny olona
Fokontany 67 ha Avaratra : Kamo mijery lisi-pifidianana ny olona
24/10/2018 admintriatra Songandina 0
Roa herinandro sisa dia ho dila ny fampielezan-kevitra sy ny fiomanana amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny 7 Novambra ho avy izao. Mbola manana fotoana araka izany ireo olona, hanantona ny fokontany tsirairay hijery ny anarany ao anaty lisi-pifidianana, hanamarina raha toa ka voasoratra ao anatin’izany. Tsara marihina fa ireo manomboka amin’ny fahavalo ambin’ny folo taonany ny olona no manana fahafahana hifidy.
Eny amin’ny fokontany tsirairay ny toerana natao hanamarinana raha toa ka tafiditra ao anatin’ny lisi-pifidinana ny olona iray na tsia. Hatreto, hita fa mbola tsy tena rototra tanteraka amin’ny fijerena ny anarany eny anivon’ny fokontany ny olona. Isan’ny voaresaka amin’izany ny eny amin’ny faritra 67 ha Avaratra Andrefana sy ny manodidina. Zara raha tafakatra ny zato ireo olona tonga nanao izany fanamarinana ny anarany izany tao an-toerana raha ny nambaran’i Jean Joseph Ranaivo, sefom-pokontany. Ny tsy fisiam-potona noho ny asa andavanandro no tena olana nolazain’ny olona teny amin’ny manodidina. Misy kosa ireo milaza fa kamo tsotra izao rehefa nanaovana fidinana ifotony mihitsy, ka nanontaniana ny antony mbola tsy mahatonga azy ireo nahatanteraka izany.
Manoloana izany tsy faharisihana momba ny fiomanana amin’ny fifidianana izany anefa, dia tsy nipetra-potsiny ny teo anivon’ity fokontany ity, fa nametraka lamin’asa fanairana ny rehetra mihitsy. Anisan’izany ny fampanenoana kiririoka, ho fampirisihana ny olona am-bava hanantona handray izay andraikitra izay amin’izao andro vitsy mialohan’ny fifidianana izao. Natao ihany koa ireo taratasy peta-drindrina. Fa indrindra nomena fahafahana manokana ireo olona milaza tsy manam-potoana noho ny asany, ka tsy mikatona ny fokontany amin’ny andro alahady.
Mety hanao ahoana tokoa izany ny fizotr’ity fifidianana ity raha sahala amin’izao avokoa ny fahavitrihan’ny mpifidy tokony hanao ny adidiny. Ireo kandidà nilatsaka ho filoham-pirenena anefa efa manao izay ho afany amin’ny fampielezan-kevitra, izay efa ho dila ao anatin’ny roa herinandro, izay any amin’ ny vahoaka ny fanalahidiny.
Valérie R .
Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nanoloana ireo vahoaka an’alin-kisa nanotrona azy tao Toliara fa hitondra fampandrosoana avo 12 heny ho an’ny firenena ny tenany. « Mila mitodika amin’ny ho avy isika izao. Ny filoham-pirenena ...Tohiny